किरात राईहरुको ईतिहास र पहिचान खोज्ने संस्था हो ‘किराया खोटाङ’ - समायोजन खबर
किरात राईहरुको ईतिहास र पहिचान खोज्ने संस्था हो ‘किराया खोटाङ’
गत बैशाख २४ गतेको आठौं जिल्ला अधिबेशनबाट किरात राई समुदायको सामाजिक संस्था ‘किरात राई यायोक्खा’ खोटाङको अध्यक्ष पद दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका–१० पाथेकाका हात्तीराम राईले सम्हालेका छन् । यायोक्खा खोटाङको विषयलाई लिएर अध्यक्ष राईसँग समायोजन खबरले गरेको कुराकानी प्रस्तुत छ ।
किरात राई यायोक्खा खोटाङ कस्तो संस्था हो ।
यो किरात राई समुदायको सामाजिक संस्था हो । विशेष गरेर किरात राईहरुको भाषा, संस्कार, सस्कृतिको संरक्षण प्रर्बधन र बिकास गर्दै आ,आफ्नोे ईतिहास र पहिचान जनित कामहरु गर्दछ ।
नयाँ पूराना गरी संस्थाभित्र विभिन्न प्रकारका पदाधिकारीहरु छन् । आन्तरिक समस्या त छैन ?
यस ययोक्खामा त्यस्तो कुनै आन्तरिक समस्या छैन कहिलेकहि राजनीतिक पार्टीहरु हाबि हुन खोज्छन् यस्तो हुनु बिडम्बना हो ।
किरात राई यायोक्खालाई अझ कस्तो बनाएर लैजाने योजना छ ।
किरात राई ययोक्खा खोटाङलाई किरात भनिने बहुभाषिक राईहरुको साँझा संस्थाको रुपमा स्थापित गर्नको लागि सहकार्य, सहभागिता र सह,अस्तित्वको काम गर्दै जाने, ययोक्खालाई आत्मनिर्भर बनाउँन बिभिन्न कोषहरु स्थापना गर्ने, भाषा संस्कार, संस्कार/संस्कृति, ईतिहास र पहिचान जनित स्थलहरुको संरक्षण प्रर्बधनजस्ता कामहरुको अल्पकालिन् र दिर्घकालिन् योजना बनाएर जाने योजना छ ।
सामाजिक कार्य गर्नका लागि खुलेको विभिन्न संघसंस्थाहरु पछिल्लो समय राजनीतितर्फ मोडिएको देखिन्छ ? त्यसैमा रुमालिदै त छैन किराया खोटाङ ?
सहि प्रश्न गर्नुभयो । धेरै संस्थाहरुमा राजनीतिकरण भईरहेको र राजनीतिकरण गर्ने प्रयास भएको देखिन्छ । मेरो बिचारमा यो काम दुर्भाग्य हो । राजनीतिकरण संस्थामा गर्ने होइन । सबै बिचारलाई फर्कन/फुल्न दिनुपर्छ । राजनीति गर्ने मान्छेहरु संस्थामा नआउनु नै बेस हो । यदि आई हालेछन् भने राजनीति छोड्नु प-र्यो यसोे गर्दा संस्था निश्कलंक हुनेछ, शुद्ध हुनेछ र निष्पक्ष सबैको हुनेछ । हाम्रो किरात राई यायोक्खा खोटाङमा भने राजनीतिकरण भएको छैन । यो आफ्नै स्वतन्त्रपूर्बक आफ्नै बिधान नीति नियममा चल्दै आईरहेको छ ।
तपाईको कार्यकालभित्र किरात राई यायोक्खा खोटाङले अब के–के गर्छ ?
मैले अघि नै भनी सकेको छु । पहिलो चाँहि १ नम्बर प्रदेशलाई किरात प्रदेश नामाकरण गर्ने अभियानमा लाग्ने, किरात राईहरुको संगठन बिस्तार गर्ने, भाषिक राईहरुको भाषा संस्कार/संस्कृतीको संरक्षण र प्रर्बद्धन गर्ने, यसमा विधालयमा पाठ्यक्रम पाठ्यपुस्तक तयारगरी पठनपाठन गर्ने/गराउने, किरात राईहरुको ईतिहास र पुरातात्विक स्थलहरुको संरक्षण गर्ने र यायोक्खालाई आत्मनिर्भर बनाउन कोष, अक्षय कोषहरुको स्थापना गर्ने ।
२०७६ जेठ २३ गते साँझ ६ : ०४ मा प्रकाशित